Nyowani yakajeka Shot pane iPhone mushandirapamwe | IPhone nhau
Mishandirapamwe yakaparurwa nekambani yeCupertino-yakavakirwa pasi pezita rekuti Shot pa iPhone, inotiratidza mifananidzo yezuva nezuva yakatorwa nevashandisi veApple zvishandiso zuva nezuva, kunyange hazvo mamwe, kana asiri iwo ese, emifananidzo iyo Aya maunganidzwa vari kure nekuve mifananidzo yakatorwa zvisina kurongwa nevashandisi vasina ruzivo. Apple yatangazve nhevedzano nyowani yemifananidzo iri muvara ndiyo inotariswa. Muchokwadi iyi nhevedzano nyowani inonzi Colors uye iri kuzadza mamabhodhi emaguta mazhinji kutenderera pasirese.
Sekureva kwaApple, uyu mushandirapamwe mutsva inotarisa pakuratidza mavara akajeka uye akasimba kuti vashandisi vanobata muhupenyu hwezuva nezuva hwehupenyu hwavo. Munguva yakapfuura kambani yakanga yatanga mimwe mishandirapamwe yerudzi urwu, asi iyi ndiyo yekutanga inotarisisa kuratidza mavara ayo michina yekambani inokwanisa kutora. Kana iwe ukatarisa mafoto anoumba mushandirapamwe uyu, zvinoita sekunge vakaguta-kuzadza kuti vape kusiyana kukuru uye kuoneka kune aya ma ads.
Zvinoenderana nekambani, iyo mifananidzo dzakatorwa nevatori vemifananidzo nevashandisi. Pasi payo tinogona kuona chinyorwa chinonzi Shot pa iPhone. Gore rakapera kambani yakaziva basa revose vakabatsirana vakabatsira kurudzi urwu rwemushandirapamwe, kutumira bhuku kune vese avo vakasarudzwa nemifananidzo yaive chikamu chemakambani akasiyana emakambani.
Mushandirapamwe Mavara, anozoratidzwa pamabhodhi emabhodhi Kubva kuUnited States, Canada, United Kingdom, Australia, France, Germany, Italy, Spain, Switzerland, Turkey, Switzerland, United Arab Emirates, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Japan, Singapore, Hong Kong, India, South Korea, China , Malaysia, New Zealand neThailand.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Nyowani yakajeka Shot pane iPhone mushandirapamwe
Lego Star Wars iyo Force Inomutsa inouya kuApp chitoro